Scrap Metal Baler, Vertical Isisiri-Metal Baler, Metal Briquetting Press Machine - Unite Wepamusoro
Hydraulic Chidimbu Metal Press Aluminium Baler Machine
Iyo Y81 Series hydraulic simbi baler ine yakavharwa extruded mamiriro, epamusoro-simba kusakara mahwendefa uye musuo chifukidziro nematombo ekucheka, ayo aigona kuveura zvimedu zvakakura kuve zvidiki pamwe nekuzadzisa kusagadzikana. Mushini wega wega unogona kudzorwa nemaoko kana otomatiki.
Kupfuura makore makumi maviri nemashanu ekubudirira ...
Muenzaniso Nha: Chinese Kugadzira Chinyorwa Kudzora Q4 ...
Muenzaniso Nha: Chinese Gadzira Chinyorwa Kudzora Y8 ...
Muenzaniso Nha: CBJ Series hydraulic chinyorwa mabhureki ekuputsa ...
Jiangyin Unite Wepamusoro Heavy Viwanda Co Ltd. ikambani yeChinese inoita dhizaini uye kugadzira michina yesimbi yekushandisa zvakare. hwakagadzwa muna 2004 uye kuwedzera kugadzirwa chikero uye kutamira maindasitiri paki muna 2012. isu tiri pedyo Shanghai, pamwe nyore chaizvo chokufambisa. ari nyanzvi akaigadzira hydraulic michini. Parizvino, yakagadzira akateedzana ezvimedu simbi kurongedza, kuveura, mota kurongedza sheari, chinyorwa simbi kupwanya uye zvichingodaro. Yese michina yekudzokorodza inogadzirwa kubva dhizaini kuenda mukugadzirwa zvinoenderana neyakaomarara mashandiro ezvekushandisa uye kushandiswa kwevakagadzikana uye vanokwanisa zvikamu zvevatengesi.
Kukosha kwekuchengetedza hydraulic simbi packer
Kuchengetedza iyo hydraulic system yeiyo hydraulic simbi baler ndeimwe yematanho akakosha ekuderedza michina yekuisa uye mashandiro emutengo wenzvimbo dzekugadzirisa uko kwese mhando yezvinhu inoshandiswa zvakare. Ita basa rakanaka resimbi chip inodhinda hydraulic system yekugadzirisa zvakare imwe yeanopinza ...
Ndeupi rudzi rwemabasa ane iyo simbi yekuveura muchina ine?
Iyo simbi yekuveura muchina ine akasiyana maficha, epamusoro basa kushanda, yakapusa mashandiro, uye zviri nyore kugadzirisa. Iyo inomiririra inogona kuiswa mukati kana kunze. Iyo yekucheka simbi muchina inoitwa uchishandisa nzira dzesainzi. Chinhu chekutanga ndechekuti mota inodzorwa nechirongwa ...
Pfupisa mashandiro uye chengetedzo yesimbi chip keke muchina
Simbi shavings imhando yemarara inogadzirwa mushure mekugadziriswa kwesimbi zvigadzirwa kana zvikamu. Iyo ndiyo mbishi yekugadzira yesimbi yemhando yepamusoro. Nekudaro, inoda kutonhodzwa-nesimbi nesimbi shavings keke muchina. Nekuti vanhu vazhinji havazive mashandiro evanoshongedza ...
Mhangura Chakagadzirwa Baler, Alligator Sheari Yenhare Digger, Metal Poda Briquette Muchina, Horizontal Baler Aluminium Chidimbu Press Machine, Hydraulic Baler / Aluminium Inogona Dhinda Muchina, Sheet Metal Baler,